Xisaabinta Isdhexgalka, sida Warbixinta Dadka laga tirada badan yahay | Martech Zone
Xisaabinta Isdhexgalka, sida Warbixinta Dadka laga tirada badan yahay
Arbacada, Agoosto 16, 2006 Saturday, April 16, 2016 Douglas Karr
Wiilku waa tiknoolijiyada si dhakhso leh ayuu u kobcayaa! Ma hubo intiina idinka mid ahi ay ku xusuustaan ​​Tom Cruise in Warbixinta Dadka laga tirada badan yahay, halkaasoo uu ugu gudbinayo macluumaadka qaab muuqaal ah. Waa kuwan muuqaalka muujinaya saameynta gaarka ah:
Dhowr sano ka hor, waxay ahayd si fudud saameyn gaar ah. Waa kuwan fiidiyowga xaqiiqda cusub ee teknolojiyadda oo leh sharraxaad sida ay u shaqeyso:
Waxaad ka heli kartaa tusaalooyin aad u fiican Xaqiiqda Eon website.
Tags: xisaabinta is-dhexgalkawarbixinta tirada yarinterface interface
101 Su'aalood… Macaamil, Siyaasad, Kaftan iyo Xiddigo